‘Maalin Haddii Aay Kaa Tagto, Cimrigaaga Qayb Ka Mid Ah Ayaa Kaa Tagtay” Qiimaha Wakhtiga | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: March 16, 2014, 9:04 am
Caalimkii weynaa ee Xasan Al Basri wuxuu yidhi, “ibn aadanow, maalmo kooban ayaad tahay, maalin haddii ay kaa tagto, cumrigaaga qayb ka mid ah ayaa kaa tagay”, maanta se waqtigeenna waxaan ku luminnaa waxaan adduun iyo aakhiro anfac inoo lahayn.
Haddii uu waqtigu kugu dhaafay, sheeko, muran, dulmi, xaaraan, maqaaxi, xan, xasad iyo xumaha walaalkaaga/walaashaada muslimka ah. Arrinkaagu ma sahalna, maalinta Rabbi addoomihiisa xisaabinayo saacad kasta oo ka mid ah waqtigaagu wuxuu imanayaa isaga oo kugu markhaati furaya oo ku eedaynaya, waxaanu kugu abuuri doonaa murugo iyo ka shallayn aan waxba kuu tari doonin.
Haddii uu waqtigu kugu dhaafay adiga oo Rabbi (SWT) ku xidhan oo xasuusan, khayr ka shaqeeyay, wanaag iyo taakulaynta bulshada ka shaqeeyay, waqtigu wuxuu imanayaa isaga oo kuu markhaati furaya, adna aad ku farxayso.
Qofka waxgaradka ah waa kan waqtiga sida fiican ugu faa’iidaysta. Waqtigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn ee la weydiin doono addoomaha maalinta Rabbi addoomihiisa xisaabin doono, maxaa yeelay waqtigu waa cimrigaaga oo qof walba waxaa la weydiin doonaa sidii uu waqtigiisa ku bixiyey intii uu noolaa.
Waxaan wada ognahay inay nolosheennu tahay maalmo, usbuucyo, bilo iyo sannado laysku daray. Mar kasta oo ay maalini tagtana cimrigeennii waxaa tagay qayb aan dib u soo laaban doonin.
Waqtiga iyo caqligu, waa labada shay ee ugu qiimaha badan ee biniaadamku haysto, labadaas qofkii dayacana waa qof nimcooyinka uu Alle siiyay aan dareensannyn. Waqtiga qiimihiisa darteed buu Rabbi (SWT) dadka oo dhan ka simay, oo qofna aanu qof kale uga badinin, caqligana qof walba in baa laga siiyay waxaana layna faray inaan samaha ku hagno, kobcinno, innaga oo adeegsanayna: iimaan, cilmi, fikir, akhris iyo dedaal si aan u hormarinno garashadeenna ama caqligeenna.
Xadiiskii rasuulkeenna suubban laga wariye NNKH ayaa ahaa,“ka faa’iideyso shan horteed. Dhalinyaronimadaada inta aanad gaboobin, caafimaadkaaga inta aanad xanuunsan, dhaqaalahaaga inta aanad xoolo beelin. Firaaqadaada inta aanad mashquulin iyo noloshaada inta aanad geeriyoon”.
Haddaba akhristaha kobciyemedia.com aynu ogaanno qiimaha uu waqtigu leeyahay. Waa muftaaxa guusha nolosha adduun iyo aakhiro. Ama waa muftaaxa guul darrada adduun iyo aakhiro.
Waqtiga u qorshee sida ugu faa’iidada iyo waxtarka badan.
Cabdillaahi Maxamuud Xasan
Ninkii Aay Zowjadiisa U Dhali Waaysay Mudo Labo Iyo Toban Sano Ah Iyo Wuxuu Sameeyay. “Qiso Cibro Qaadasho Mudan”..